Olole loogu bedelayo isticmaalka dollarka ganacsiga qaaradaha iyo caalamka Dad badan ayaa isku raacsan in daaha gadaashiisa ay ka jiraan Itoobiya iyo Afrikaba - ዜና ከምንጩ
In kasta oo ay reer Yurub ka tageen Afrika sannado badan oo bililiqo iyo dhac ay ku hayeen qaarada Afrika, haddana shaqadoodu waxay ka dhigaysaa Afrika meel ay colaado sokeeye ka socdaan, dhibaato iyo saboolnimo qoto dheer.
Ka dib raadadkii xumaa ee Dagaalkii Labaad ee Adduunka ee Yurub, Hay’adda Lacagta Adduunka (IMF) oo hadda loo yaqaan Sanduuqa Lacagta Adduunka (IMF), waxaa lagu aasaasay shir ka dhacay Brightonwood ee Mareykanka bishii Luulyo 1936.
Inkastoo hadafku ahaa in la dhiso xarun maaliyadeed oo iskaashato si dib loogu dhiso qaarada ay dagaaladu aafeeyeen, hadana waxaa la rumeysan yahay in ay ku jirto shirqool la doonayo in lagu xaqiijiyo sareynta wadamo kooban.
Daraasaduhu waxay muujinayaan in fikradda hal lacag ah ay tahay qiimaha guud ee dalal badan ay dib ugu soo laabteen Maraykanka.
Waxa kale oo la og yahay in wadamadu dahab ka ahaan jireen lacagta ugu badan ee wax lagu kala iibsado.
Si kastaba ha ahaatee, sanado ka dib, markii doolarka lagu kala sarifto, waxaa la sheegay in dalalku ay bilaabeen inay iibsadaan dollarka dahabka ah.
Taasi waxay u sahashay in Maraykanku uu dahab badan ka helo kaydka dahabka ah ee uu ku kaydsan yahay, balse markii dambe, markii dahabku aad loo raadinayo, Maraykanku wuxuu jaray xidhiidhkii uu la lahaa dollarka.
Dabadeed, ganacsiga caalamiga ah ka sakow, xataa meheradaha maxaliga ah ee waddan ka mid ah waxay ku kala iibsanayeen doolarka
Arintan ayaa la sheegay inay tahay dollar yari, taasoo ku qasabtay wadamada inay wax iibsadaan oo ay kaydsadaan dollarka si looga hortago sicir bararka.
Tani waxay u ogolaatay Maraykanka inuu ka faa’iidaysto kaliya iibinta doolarka. Waxaa la sheegaa in markii Mareykanka uu Yurub ka soo baxay ee uu bilaabay in lagu dhaqmo adduunka oo dhan, ay taasi dhabar jab weyn ku noqon doonto gaar ahaan Afrika.
Dhaqaale yahanka ah borofisar cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacada Unity Dr. Demmelash Habte oo ka faallooda arimahan subax cusub waxa uu ku sheegay in sarifka dollarku yahay ganacsiga ugu wayn ilaa 1973kii.
Sida uu sheegay, dollarka waxa loo adeegsadaa ganacsiga caalamiga ah, maaha wax xoog ah, balse waxa loo adeegsadaa heshiisyada ganacsi ee dalalka.
Waxa la isla gartay in sarifka lacagta dollarka lagu qiimeeyo.
Laakiin ka hor, ayuu yidhi, dahab ayaa lagu kala iibsan jiray. Khabiirku waxa uu intaa ku daray in wixii wakhtigaas ka dambeeyay wadamo badan lagu cadaadiyay inay dahabka ku bedelaan dollar.
Waxa uu xusay in wadamada soo koraya sida Itoobiya uu si ba’an u saameeyay sicir bararka tan iyo markii ay bilowdeen dagaaladii qaboobaa ee uu dalku la daalaa dhacayay nolol maalmeedka. Sarifka lacagaha qalaad ee dollarka ee wadamo badan, si kastaba ha ahaatee, macnaheedu maaha in ganacsi kale aanu jirin.
Sida uu qabo khabiirku, hadda waa mid ka mid ah sarifka ugu badan ee Itoobiya. Sababtuna waxay tahay baahida badan ee loo qabo iyo xaqiiqada ah in dalal badan ay soo hoos galeen gumaysigii Ingiriiska. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu qiray in tiradooda aysan ku filneyn in laga adkaado barnaamijka Nukliyeerka ee Ruushka.
Waxay muujinayaan in saddex xal oo suurtagal ah loo isticmaali karo si loo yareeyo saameyntan. Talaabada koowaad waa in dollarka lagu soo iibiyo agabka lagama maarmaanka u ah dhismaha kaabayaasha warshadaha.
Waxa uu sheegay in marka la eego xaaladda dhaqaale ee hadda jirta, aanay suurtogal ahayn in gabi ahaanba meesha laga saaro lacagta dollarka ah ee lagu horumarinayo dhaqaalaha Itoobiya.
Si kastaba ha ahaatee, waxay muujiyeen in isticmaalka dollarka kaliya wax iibsiga iyo iibinta muhiimka ah ay hoos u dhigi doonto saameynta. Xalka soo socdaa waa in lala ganacsado wadamada iskood, taas oo si weyn u dhimi doonta saamaynta Horumarinta isku-tiirsanaanta iyo ganacsiga hufan ee ka dhexeeya wadamada.
Waxa uu sheegay tusaale ahaan in ay lagama maarmaan tahay in la joojiyo isticmaalka lacagta dollarka ah ee Shiinaha lagula ganacsanayo, lana gaaro heshiis ku saabsan isticmaalka lacagta labada dal. Waxa kale oo uu sheegay in marka laga soo tago in meesha laga saaro hoos u dhaca sarifka lacagaha qalaad in lacag badan lagu iibsan karo dollar ama Pound.
Xalka kale waa in la raaco nidaamka wax kala iibsiga. Badeecooyinkaas ama adeegyadaas oo ay dalalkii Midowgii Soofiyeeti hore u isticmaali jireen ku dhawaad 50 sano nidaamka ganacsiga iyadoon wax xiriir ah lala samayn reer galbeedka. Waddan soo saara wax-soo-saarka beeraha wuxuu la baayacmushtara waddan kale oo soo saara baabuurta qiimo go’an. Tani waxay ku xoraynaysaa wax kala iibsigooda lacag.
Waxa uu sheegay in ganacsiga u dhaxeeya dalalka Afrika uusan dhaafin boqolkiiba 20 ilaa hadda, isaga oo intaa ku daray in qaaradda ay kori karto haddii ay isticmaasho hababka ganacsi ee aan kor ku soo xusnay.
Wuxuu xusay in Afrika oo suuqyada caalamka u dhoofisa saliida,wax soo saarka beeraha,mashiinada,mashiinada,macdanta iyo xoolaha ay ilaa hadda ka bixi wayday ganacsigeeda ku salaysan dollarka,maya,isaga oo sheegay inay u taalo Suuqa reer galbeedka in dollarka lagu heli karo. Waxa uu tilmaamay in haddii Afrikaanku ay hal lacag ku kala iibsan karaan ama ku kala iibsan karaan lacagtooda, in ay abuuri karaan suuq ballaadhan oo ay midba midka kale u keenaan oo ay si degdeg ah u koraan cadaadiska reer galbeedka.
Waxaa la sheegaa in dagaalkii labaad ee aduunka ka dib, in dalal badan oo ka xoroobay gumaystaha ay weli ku naaloonayeen madax-bannaani siyaasadeed, oo aan dhaqaale ahayn.
Taasi waxay keentay in ka badan 150 waddan ay weli ku nool yihiin faqiirnimo, waxayna culimadu sheegeen in dagaalkii ka dib dhaqaalaha adduunka loo qorsheeyay in ay ka faa’iidaystaan waddamada hanti-goosadka ah.
Nidaamkani waxa uu ogolaanayaa in wadamada saboolka ah ee hanti-wadaaga ah ay ku tiirsanaadaan oo ay si jaban ugu iibiyaan alaabadooda,halka wadamada hodanka ah ay wax soo saarkooda uga iibgeeyaan wadamada faqiirka ah qiimo aad u sareeya. “Waxay u muuqataa in la gaadhay waqtigii nidaamkan uu isbeddeli lahaa,” ayuu yidhi.
In kasta oo Yurub ay saamaynteeda ku leedahay dalalka kale ee soo koraya, haddana waxa ay samaysatay xidhiidh ganacsi oo qaaraddeed iyo mid dhaqaale si ay isaga xorayso saamaynta nidaamka dhaqaale ee dunida ee uu Maraykanku hoggaamiyo, si ay u samaystaan Midowga Yurub, korna u qaadaan xubinnimadooda.
Waxay ku nuuxnuuxsadeen in tani ay khibrad wanaagsan u noqon karto Afrikaanka iyo in Afrika ay ka shaqeyso sidii ay u samaysan lahayd dhaqaalaheeda.
Sidoo kale, Brazil, Russia, India, China iyo South Africa oo iska kaashanaya magaca BRICS si ay uga hortagaan hantiwadaaga aduunka ragaadiyay ilaa 1989kii.
Afrika ayuu sheegay in ay ka jiraan aagag dhaqaale sida Waqooyi, Koonfur, Bari iyo Galbeed, isaga oo sheegay in haddii taas la tixgeliyo ay suurtagal tahay in laga baxo dhibaatada, lana galo wadadii koritaanka.
Tan iyo burburkii hantiwadaagga, nidaamka dhaqaale ee US-EU waxa uu ahaa mid ka taliya hal hay’ad oo ka talinaysay hantiwadaaga, gaar ahaan waddama aan horumarin.
Taasi waxay sii kordhisay dhibaatada haysata wadamada saboolka ah, Maraykanka ayaa noqday waddan aan sharci lahayn oo dalalka kale ah. Shiinaha iyo Ruushka ayaa ka mid ah dalalka hormuudka ka noqday ka hortagga cadaadiska uga imaanaya reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka.
Waxa uu mar sheegay in la helo lacag la wada leeyahay oo adduunka ka dhaxaysa, marar kalena waxa uu isku dayey in uu ganacsiga labada dal ka dhigo lacag u gaar ah. Tani kaliya ma fududeyn cunaqabateynta Mareykanka, laakiin sidoo kale waxay gacan ka geysatey in ganacsiga wadamada dollarka lagu qiimeeyo si ka dhaqso badan oo ka dhaqso badan wadamada sarifka lacagaha qalaad.
Culimadu waxay soo jeedinayaan in Itoobiya ay gacmaha isqabsato wadamada ku hawlan sidii ay uga gudbi lahaayeen cadaadiskaas, kana ilaalin lahayd cadaadiska ganacsiga iyo dhaqaalaha ku salaysan dollarka. Hadda, waxaa jira kuwa leh haddii aad bilowdo hawshan oo kale, waxay u badan tahay inay noqon doonto mid aad u dhib badan.
Si kastaba ha ahaatee, khubaradu waxay sheegeen in haddii ay wax ka beddesho culayska dhaqaale ee aanay wali la kulmin, ay ku qasbanaan doonto inay dedaal badan ku bixiso, sababtoo ah waxa yaraanaya.
Si kastaba ha ahaatee, mar haddii waddan kastaa uu xaq u leeyahay inuu sameeyo wuxuu doono iyo inuu raaco dariiqa dhaqaale ee uu doorto, waxay ku xiran tahay halganka uu uga baxo dhibaatada.
Sida uu qabo dhaqaale yahanku, marka laga soo tago baahida loo qabo in la isticmaalo xalka ugu horreeya ee lagu sheegay si looga baxo dhibaatada dhaqaale ee Afrika, waxaa muhiim ah in diiradda la saaro xalalka labaad iyo saddexaad.
Haddii kale, wuxuu sheegay in dhammaan dalalka Afrika oo ay Itoobiya ku jirto ay la kulmi doonaan dhaqaale xumo ka daran midda hadda haysata.
Waxay si adag u soo jeedinayaan in Afrika oo qayb ka ah ololaha #NoMore, oo ay ku kacayso lacagta dollarka iyo lacagaha kale ee qalaad, ay samaysato lacag u gaar ah, lana xoojiso aagga ganacsiga xorta ah ee waddamada xubnaha ka ah, dhaqaale ahaan kobocdo, kana guurto gumaysiga cusub.
Heer shaqsi iyo mid shirkadeedba waxa jira in lagu dadaalo sidii loo dhiiri galin lahaa loona dhiiri galin lahaa isticmaalka lacagaha qalaad marka laga soo tago lacagta dollarka iyo waliba qaar ka ganacsada dollarka una safra Shiinaha iyo Dubia.
Culimadu waxay soo jeedinayaan in ay adkaan karto in la sameeyo isbeddel hal mar ah, iyo in hadda laga bilaabo ay suurtagal tahay in si tartiib tartiib ah loo beddelo fikradaha aasaasiga ah iyo mabaadi’da.
አዲስ ማለዳ Tahisaas 16 2014 No 27
Total views : 7538531